Ciidanka Dowladda oo caawa gacanta ku dhigay nin bambo gacmeyd ku weeraray Booliska Gobolka Banaadir - iftineducation.com
Ciidanka Dowladda oo caawa gacanta ku dhigay nin bambo gacmeyd ku weeraray Booliska Gobolka Banaadir
iftineducation.com – Ciidamada Dowladda Somaliya, ayaa waxay caawa gacanta ku dhigeen nin dhalinyaro ahaa oo ka tirsan Ururka Al Shabaab, waxaana gacanta lagu dhigay, xilli uu qarax bambaano ku weeraray askar ka tirsan Booliska Gobolka Banaadir.
Ninkaan, ayaa qaraxa ku weeraray Booliska fariisimaha ku leh Hotel Salaama, oo ku yaala inta u dhaxeyso xaafadaha Baar Ubax iyo Black Sea ee Degmada Hodan.
Qaraxa ka dib waxa uu isku deyay in uu baxsado, hase ahaatee askari ku sugnaa goob ku dhow goobtii uu qaraxu ka dhacay, ayaa waxa uu gacanta ku dhigay ninkaan oo cararaaya, xilli uu askarigu ku soo baxay daryanka qaraxa.
Goobjooge, ayaa soo sheegaaya in ciidan ka tirsan Nabad Suggida ay durbaba la wareegeen ninkaasi, isla-markaana ay ula dhaqaaqeen xarumaha Nabad Suggidu ku lee dahay Magaalada Muqdisho.
Tallaabada lagu qabtay ninkaan, ayaa waxay ku soo aadeysaa, xilli inta badan ay baxsadaan ragga Shabaabka ka tirsan ee falalka amni darada ka geysanaaya Magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Somaliya oo maanta kormeeray Terminal-ka cusub ee Garoonka Aadan Cadde laga dhisaayo (Daawo Sawirada)